उपेक्षाबाट खारेज, स्थानीयले खुलाएको रात्रि विद्यालय
विकाश पराजुली बुटवल, १ चैत
पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि दिउँसो पढ्न नपाउने विद्यार्थीहरूका लागि रात्रि विद्यालयहरू खेलेका छन् । देशका विभिन्न भेगकमा यस्ता विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
बुटवलमा पनि दिनभर काम गरेर साँझ पढ्ने विद्यार्थीका लागि रात्रि विद्यालय सञ्चालनमा आएको साढे ५ दशक भएको छ । २०२१ सालमा स्थापना भएको ज्ञानोदय रात्रि माध्यमिक विद्यालय बुटवलमा रहेको यस्तो एउटा विद्यालय हो ।
तर, रात्रि विद्यालयहरूमा पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको संख्या कम हुँदै गएको छ । पर्याप्त प्रचार प्रसारको अभाव र स्थानीय सरकारको कम प्राथमिकतामा परेका कारण यस विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
यसरी नै जाने हो भने कतै यस विद्यालयको अस्तित्व हराउने हो कि भन्ने चिन्तासमेत बढ्दै गएको छ । विद्यालयका प्राचार्य गुरु पौडेल भर्ना हुने समयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढी हुने भए पनि नियमित कक्षामा उपस्थित हुने विद्यार्थीहरूको संख्या भने कम हुँदै गएको बताउँछन् ।
बुटवल– ५ मा रहेको यस विद्यालयमा दिवा र रात्रि कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाल रात्रि विद्यालयमा १ सय १७ जना विद्यार्थी रहेका छन् । कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यापन हुने यस विद्यालयमा ५ जना माध्यमिक तहका दरबन्दीहरू, ४ जना निमावि तहका दरबन्दी र १–१ जना लेखापाल र कार्यालय सहायक रहेका छन् ।
विद्यालयले कक्षा ६, ७ र ८ मा कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउँदै आएको छ भने कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिकअन्तर्गत शिक्षा विषय पढाइ हुने गरेको छ ।
विद्यालयका प्राचार्य पौडेलका अनुसार अहिले यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू ३५ वर्षमाथिसम्मका रहेका छन् । ‘कुनै समयमा त नाति, नातिना हुर्काएकाहरू पनि पढ्न आउनुभयो । कतिपय ८–१० वर्ष पढ्न छुटेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ’, उनले भने ।
साँझ ४ बजेदेखि ८ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयलाई आगामी वर्षहरूमा प्राविधिक शिक्षा ल्याउने योजना विद्यालयको छ । ‘बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा योजनामा पनि विद्यालयलाई समावेश गरेको छ । प्राविधिक विषय ल्याउन सके विद्यार्थीहरू बढी आउँछन् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ’, उनले भने, ‘यही अवस्थामा हुने हो भने विद्यार्थीहरू बर्सेनि कम हुँदै गएका छन् । कुनै बेला विद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा आउन सक्छ भन्न सकिँदैन ।’
यसरी सुरु भएको थियो विद्यालय
दैनिक कामकाज भएकाहरू दिउँसोको समयमा पढ्न पाउँदैनथे । दिनमा मजदुरी गर्नेहरूको पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न नपाएपछि बुटवलमा एउटा रात्रिकालीन विद्यालयको परिकल्पना गरियो । दिउँसो पढाइ छुट्नेहरूलाई राति पनि पढाउन सकिने नयाँ सोचसहित बुटवलमा ज्ञानोदय रात्रि माध्यमिक विद्यालय २०२१ सालमा स्थापना भयो ।
पञ्चायतकाल थियो । त्यो बेला जनवर्गीय सङ्गठनहरू थिए । केही न केही काम जनवर्गीय सङ्गठनले गर्नुपथ्र्यो । बुटवलमा क्रियाशील नेपाल युवक सङ्गठनको प्रयासमा बुटवलका चन्द्रध्वज श्रेष्ठ, दुर्गालाल बजिमय, सुरेन्द्रमणि श्रेष्ठलगायतले रात्रिमा पनि विद्यालय चलाउनुपर्छ भन्ने नयाँ सोच निकालेर विद्यालय सुरु गरेका हुन् ।
पञ्चायती शासनका बेला स्थापना भएको यस विद्यालयको नाम सुरुमा ‘ज्ञानोदय प्रौढ विद्यालय’ थियो । स्थापनाकालमै कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यापन हुन थालेको हो ।
तर, राती अध्यापन गराउन कम चुनौती भने थिएन । पञ्चयातकालको समय थियो । विद्यार्थीहरू कम हुन्थे । शिक्षकहरू पनि आंशिक रूपमा अध्यापन गराउँथे । दिउँसो उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने र साँझ मात्र विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे ।
‘विद्यार्थीहरू पनि कम हुन्थे । उद्योग, पसलमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडअनुसार छुट्याएर अध्यापन हुने गथ्र्यो’, विद्यालयका पूर्वअध्यक्ष पुनाराम पोखरेलले भने, ‘अभावका बीचमा सुरु भएको विद्यालयमा सुरुमा मइन्टोल र लालटिन बालेरसमेत पढाइयो ।’
पछि मात्र विद्यालयमा बुटवल नगर पञ्चायत, उद्योग बाणिज्य संघ, जिल्ला पञ्चायत आदि निकाय र संस्थाहरूले पनि आर्थिक अनुदान दिन थालेपछि विद्यालय विस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको उनले बताए ।
२०२९ सालमा खारेज, २०३८ सालमा व्युँताइयो
७ वर्षसम्म विद्यालय राम्ररी चलिरहेको थियो । राती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू क्रमशः बढिरहेको अवस्थामा २०२८ सालमा देशमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना लागू गर्ने सरकारले घोषणा ग¥यो ।
पहिलो पटक कास्की र चितवनमा लागू भएको यो योजना दोस्रो चरणमा २०२९ सालमा रूपन्देही जिल्लासमेतमा लागू भयो । विद्यालयलाई स्वीकृत गराउन अनेकन प्रयास भए पनि विद्यालयले स्वीकृति पाएन ।
विद्यालयले दरबन्दी पाउन त टाढाको कुरा, कोटामै नपरेपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै ज्ञानोदय रात्रि माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्न परिपत्र ग¥यो र विद्यालय खारेज भयो ।
विद्यालयको भवनमा २०३० सालमा तानसेन पाल्पामा रहेको शिक्षाशास्त्र इन्स्टिच्युट (हालको बुटवल बहुमुखी क्याम्पस) बुटवलमा सर्ने भएपछि त्यहीँ बस्यो ।
२०३७ सालमा पुनः विद्यालयलाई व्युँताउने निर्णय भयो । तर, चलाउने कसरी ? त्यो बेला पनि नगर पञ्चायत र उद्योग बाणिज्य संघले आर्थिक अनुदान दिने उद्घोष गरे । र, विद्यालय चलाउने निर्णय भयो ।
बन्द विद्यालय चलाउन कम चुनौती भने थिएन । संघसंस्थामा विद्यार्थीहरूलाई रात्रिकालमा पढ्न चाहनेहरू माग गरियो ।
तत्कालीन बुटवल नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च बृजमान श्रेष्ठको सक्रियतामा विद्यालय व्युँताइयो । १ सय ५२ जना पुरुष र ४ जना महिला विद्यार्थीहरू भर्ना हुने भए । तर, तयारी चल्दाचल्दै २०३८ सालमा असोज १३ गते बुटवलमा भीषण बाढी आयो ।
विद्यालयको भौतिक सम्पति नष्ट भयो । कागजपत्र सबै नष्ट भए । तर, त्यसबेला श्रेष्ठकै अगुवाइमा फेरि संरचना निर्माण गर्न थालियो । २०३८ पुस पहिलो सातादेखि रात्रि माविमा पढाइ सञ्चालन भयो ।
‘विद्यालयमा बाढी पसेपछि २०२८ सम्मका रेकर्डहरू विद्यालयमा भेटिँदैनन्, विद्यालयका प्राचार्य गुरु पौडेल भन्छन्, ‘अभाव र समस्याका बीच चल्दै आएको विद्यालय विस्तारै अब तङ्ग्रिने क्रममा छ ।’
विद्यालय व्युँताइएपछि चन्दाबाटै केही वर्ष चलेको विद्यालयका पूर्वशिक्षकहरू बताउँछन् । त्यसपछि २०४१ सालमा सम्बन्धन पाएपछि भने सरकारी सेवा, सुविधा विद्यालयमा आएको प्राचार्य पौडेलले बताए । सम्बन्धन पाएपछि कक्षा ६ देखि १० सम्म विद्यालयमा अध्यापन हुन थालेको हो ।
नियमित छैनन् विद्यार्थीहरू
भर्ना समयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढी भए पनि विद्यालयमा कक्षा लिने विद्यार्थीहरूको संख्या भने घट्दै गइरहेको विद्यालयले बताएको छ । अरूको घरमा काम गर्ने, दिउँसो जागिर गर्ने र साँझ पढ्न आउनेहरूको कक्षा नियमित हुन नसकेको विद्यालयका प्राचार्य पौडेलको भनाइ छ ।
‘यहाँ पढ्ने अरूको घरमा बसेर काम गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू छन् । घरमा पाहुना आउँदा विद्यार्थी आउँदैनन् । विद्यालयमा आइहाले कतिपयले घरमा पाहुना आए भनेर बोलाएपछि विद्यार्थीहरू जाने गर्छन्’, उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा नियमित गराउन पनि हामीलाई चुनौती छ ।’
उपमहानगरपालिका के गर्दै छ ?
उपमहानगरपालिकासँग नजिकै रहेको यो विद्यालयले त्यति फड्को भने मारेको छैन । ज्ञानोदय दिवा र रात्रि माध्यमिक विद्यालय नाम रहेको यस विद्यालयमा दिवा र रात्रि हेर्ने व्यवस्थापन समिति, प्राचार्य, शिक्षक, प्रशासन फरकफरक छन् । भवन मात्र एउटै प्रयोग भएको छ ।
कुनै समय ‘अधुरो शिक्षा पूरा गर्ने’ उद्देश्यले स्थापना भएको ज्ञानोदय रात्रि माध्यमिक विद्यालय अहिले भने स्थानीय तहले हेरिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले भिन्न परिस्थितिको विद्यालय ज्ञानोदय रहेकाले यसको हाल अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र विद्यालयमा नयाँ नीति अवलम्बन गरिने बताए ।
उनले सीप, इलमयुक्त शिक्षा दिलाउने र विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्ने गरी योजना बनाइने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १, २०७६, ०७:०८:००